नीजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च अब सरकारले व्यहोर्ने – Khabar PatrikaNp
नीजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च अब सरकारले व्यहोर्ने
August 21, 2020 146
काठमाडौं । अब नीजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले निजी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोनाको संक्रमण दर निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले नीजि अस्पतालमा कोरोनाका विरामी उपचार गराउने र त्यहाँ लागेको न्यूनतम खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको संख्या विस्तार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अस्पताल भरिभराउ हुने सम्भावना भएकाले बिरामीको उपचारका लागि निजी अस्पतालमा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ एक मन्त्रीले जानकारी दिए । काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
यो पनि -कोरोनाले निन्द्रा लुटेको काठमाडौँबासीलाई अर्को दुखद खबर
काठमाडौँ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा गरेकै दिनदेखि तरकारी र फलफूल मूल्य झन्डै ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबारको तुलनामा बिहीबार मुख्य तरकारीको भाउ थोकमै १० देखि ८० प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ ।
बजारमा तरकारीको आपूर्ति सामान्य भए पनि माग बढी भएकाले मूल्य बढेको हुनसक्ने अनुमान समितिले गरेको छ । समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा बुधबारका लागि ४७६ मेट्रिक टन तरकारी भित्रिएकोमा बिहीबारका लागि छ सय मेट्रिक टन तरकारी भित्रिँदासमेत भाउ बढेको छ ।
समितिका अनुसार बुधबार प्रतिकेजी १६५ रुपैयाँ थोकमा बिक्री भएको कागती बिहीबार २९५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ भने प्रतिकेजी ५६ रुपैयाँ थोकमा कारोबार भएको गोलभेँडा ७० रुपैयाँ भएको छ । यस अवधिमा करेला प्रतिकेजी २२ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ, तामा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ थोक मूल्यबाट ११० रुपैयाँ पुगेको छ । ं गोरखापत्रमा खबर छ ।
यस्तै तनेबोडी प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ थोक मूल्य बढेर ११० रुपैयाँको पुगेको समितिले जनाएको छ । यी तरकारीको भाउ खुद्रा बजारमा अझै छोइ नसक्नुछ । एक दिनमै ८० प्रतिशतसम्म तरकारी महँगो हुनु तरकारी व्यापारीको कालोबजारी भएकाले अनुगमन गरेर कारबाही गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
Prevजिबन सफल बनाउनको लागी यि तीनतरिका अपनाउनुहोस
Next‘छोराले मोबाइल चलाएर बस्दा बाँचियो’..
किन तनावमा छ बच्चन परिवार? मध्ये राती जयाले दिइन् प्रहरीमा उजुरी
आमा बाबु मेकानिक, दुई छोरा गाडी निर्माता…
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल कार्तिक २० गते, बिहीबार, ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर ०५ तारिख
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा चासो अगाडि बढाउनुभएको छ
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34221)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34072)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33513)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29117)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27492)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25291)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22659)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21269)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20259)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19606)
‘यो दाजुको मिर्मिरे आँखा’ गीतका सर्जक धनबहादुर गायकको खोलामा नुहाउँदै गर्दा निधन
भर्खरै कन्चनले देखाए यती ठुलो प्र’माण, अनीशाले नै कु’ट्न लगाएकी रहेछिन्, हेर्नुहोस भिडियो सहित ||
सावधान ! कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण
माइत गएकी श्रीमतिले बिहे गरेर भागिन,श्रीमान रुदै मिडियामा,ससुरालीले दिए यती ठुलो धोका-भिडियो हेर्नुहोस
हलेशी महादेबको दर्शन गर्दै आज माघ १२ गते । सोमबारको राशिफल हेनुहोस , भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस